अन्तिम ४ कै निम्ति संगर्ष गर्दै युनाइटेड !! पोग्बाको २ पेनाल्टी गोलमा वेस्टह्याम माथि युनाईटेड बिजयी - Experience Best News from Nepal
प्रिमिएर लिग फुटबल ३४ औ चरण खेल अन्तर्गत म्यानचेस्टर युनाइटेड विरुद्ध वेस्ट हेमको खेलमा युनाइटेडले आफ्नो घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफर्डमा अर्को जित निकालेको छ । बार्सिलोनासंगको हार पश्चात घरेलु लिगमा सुधार खेल देखाउदै युनाइटेडले प्रिमिएर लिग अंक तालिकाको अन्तिम ४ का निम्ति संगर्ष गरिरहेको देखिन्छ । आर्सनलको १ खेल बाकी हुदा युनाइटेड मात्रै ५ औ स्थानमा अबस्थित छ ।
आजको वेस्ट ह्याम विरुद्धको खेलमा पौल पोग्बाले पेनाल्टी मार्फत पहिलो हाफको पहिलो १९ औ मिनेटमा अग्रता दिलाएका थिए । गोल युनाइटेडले गरेता पनि अन टार्गेट सट भने पहिलो हाफमा एक मात्रै रहन पुग्यो भने पोसेनसन् वेस्टह्यामले बनायो । पहिलो हाफमा वेस्टह्यामले खास खेल देखाएन तर अट्याक र सम्भावना भने निकै बनाएको थियो ।
दोश्रो हाफको प्रवेशमा ४९ औ मिनेटमा नै वेस्टह्यामले फिलिपे एण्डरसनको गोलमा बराबरी गोल गर्न सफल भयो । तर पुन म्यानचेस्टर युनाइटेडले ८० औ मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई पोग्बाले गोल दिलाए र खेल २-१ ले अगाडी पढ्यो । खेलमा अन्य कुनै गोल हुन सकेन र अन्तत युनाइटेड २-१ ले विजयी भयो ।
यस जितसंगै युनाइटेडले ३३ खेलबाट ६४ अंक बटुल्न सफल भएको छ भने वेस्टह्याम अर्को हार बटुल्दै ४२ अंक बनाएको छ ।
एसियन हिरो स्पर्सका सनलाई ‘प्लेयर अफ दि इयर’ अवार्ड
सिटीको एक खेल अगाबै लिभरपूल उक्लियो शिर्ष स्थानमा
३ बर्षे सम्झौताको साथ् ओले गुनर साेल्सायर बने युनाइटेडका स्थायी प्रशिक्षक
दुविधामा सिमित कौटिन्हो भन्छन बार्सिलोनामा रहन्छु कि रहन्न त्यो यकिन छैन !!
कहाँ र कहिले भेट्दै छन् सार्रीले क्रिस्टियानो रोनाल्डो !!